Mareykanka iyo Britain oo digniin culus u jeediyay musharixiinta haysata dhalashada dalalkaas – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Mareykanka iyo Britain oo digniin culus u jeediyay musharixiinta haysata dhalashada dalalkaas
Danjirayaasha Mareykanka iyo Britain u fadhiya dalka Soomaaliya ayaa fariin digniin ah u diray musharixiinta haysata dhalashadda labadaasi dal islamarkaana u loolamaya xilka madaxtinimada Soomaaliya.
Barta twitterka danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in muwaadiniinta Mareykanka ee ku nool dalalka kale ee lagu helo musuq-maasuq in lala tiigsan doono sharciga u degsan dalka Mareykanka.
Waxaa musharixiinta madaxtinimadda ku jira kuwo haysta labo dhalasho, iyadoo kala bar musharixiinta sanadkaan ku tartamaysa doorashada ay haystaan baasaboorada Mareykanka, Canada, Britain iyo kuwo kale.
Dhinaca kale, safiirka xilka kasii degayso ee boqortooyadda Britain u joogta Soomaaliya, Harriett Mathews ayaa iyadana codkeeda ku biirisay in muwaadiniinta Britishka ee ka qeyb qaadanayo nidaamka doorashada ee dalalka kale uu quseeynayo sharciga Britain ee musuq-maasuqa.
Sidoo kale, ergayga u hadlay Midowga Europe ayaa sheegay in dowladaha kale ee EU-da soo saari doonaan digniino la mid ah kuwa ay dowladaha Mareykanka iyo Britain uga digeen shaqsiyaadka haysta dhalashadda dalalkooda ee ka qeyb galayo doorashadda madaxtinimadda Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, digniinaha caalamiga ee ay jeedinayaan dowladahaasi ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay beesha caalamka soo saareen war-saxaafadeed ay kaga walaacsan yihiin go’aano kasoo baxay madaxda madasha qaran oo ku aadan kordhinta tirada xildhibaanada Aqalka Sare iyo in markale doorasho la geliyo 5 ka mid ah 24-kii xubnood ee ay guddiga xallinta khilaafaadka doorashadda ay xubnahaasi horey u laaleen.